Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. “अनुहारले जीवन बदल्न सक्दैन” – Emountain TV
“अनुहारले जीवन बदल्न सक्दैन”
काठमाडौँ, २७ बैशाख । मोडलिङका लागि अनुहार नै सबै कुरा हैन भनेर क्यानेडियन मोडल विन्नी हार्लोले प्रमाणित गरेकी छन् । भिटिलिगो, लुकोदेर्मा अर्थात् दुबी रोग भएकी विन्नी हालै न्युयोर्कमा आयोजित मेट गालाको रेड कार्पेटमा पहिलो पटक हिँडेकी छन् । उनी विश्वका टप मोडलहरूको लिस्टमा पनि अग्रपंक्तिमा पर्छिन् ।
क्यानेडियन मोडल विन्नी हार्लो न्युयोर्कमा आयोजित मेट गालामा । न्युयोर्कको राम्रो फेसन इस्टिच्युट मानिने मेट गालाले प्रत्येक वर्ष फेसन एग्जिबिसन गर्दै आएको छ, जहाँ विश्वका एक से एक सेलेब्रिटीहरू विभिन्न डिजाइनरका पहिरनमा सजिएर रेड कार्पेटमा हिँड्ने गरेका छन् ।
सानैदेखि विन्नीको रुचि फेसनमा थियो । मेट गालाको रेड कार्पेटमा उभिनु उनको सपना थियो । ‘मेट गालाको सबैभन्दा मोहक पार्ट भनेको लुक्स हो । मेट त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ आउनकै लागि सेलेब्रिटीहरूले धेरै खर्च गरेर अति राम्राराम्रा लुगा लगाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘मेरो लागि यही चुनौती थियो । तर सबैले प्रशंसा गर्नुभयो ।’ संसारका सेलेब्रिटीहरूलाई एकै ठाउँमा देख्न पाउनु रोचक अनुभूति रहेको उनले बताएकी छन् ।
क्यानडामा जन्मिए पनि उनी अचेल बेलायतमा बस्छिन् । सन् २०१७ मा बेलायतमा उनले वुमन अफ द इयरको अवार्ड नै जितेकी थिइन् । २२ वर्षे विन्नीलाई चार वर्षको उमेरदेखि दुबीको समस्या देखिएको थियो । कुनै समय उनलाई ‘गाई’ र ‘जेब्रा’ भनेर जिस्क्याइने गरिन्थ्यो रे । तर पनि उनले हिम्मत हारिनन् । ‘एकदमै दुख लाग्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर मेरो जिन्दगी मेरो अनुहारको उपज हैन भन्ने मलाई थाहा थियो । अहिले म आत्मविश्वासी छु ।’
पप स्टार माइकल ज्याक्सनलाई पनि यही रोग लागेको अनुमान लगाइएको थियो । काला वर्णका माइकल पछि गोरा देखिएका थिए । उनको अनुहार र पाखुरामा दुबी आएको थियो । अनुहार, पाखुरासहित शरीरभरि दुबी भएकी विन्नीले फेसन र मोडलिङप्रतिको परम्परात मान्यता परिवर्तन गर्नका लागि क्याम्पेन नै चलाउने प्रण गरेकी थिइन् । उनी स्पेनको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको ब्रान्ड एम्बासडर नै हुन् । ब्रान्ड एम्बासडरका रूपमा उनले ‘बिनासर्त सहनशीलता र समानता’ भन्ने मान्यतालाई प्रमोट गर्दै आएकी छन् ।
‘यो छालाको अवस्था हो, यसलाई जीवन नै परिवर्तन गर्ने कुरा मान्नु हुन्न,’ उनले भनेकी छन्, ‘म आफूलाई माया गर्छु । अवसरहरू मेरो काखमा खस्दै आए । यसको लागि म भगवान्लाई धन्यवाद भन्छु । हरेकले आफैंलाई माया गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।’
आफूले मेट गालामा लगाएको पहिरनबारे पनि उनले बताइन् । ‘मैले यो पहिरन बनिसकेपछि देखेकी हुँ । गालाबाट आएको ड्रेसको थिमअनुसार डिजाइन अर्डर दिएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘यो हेर्न म पनि एकदमै उत्सुक थिएँ । यो एकदमै राम्रो छ । यसमा आर्टको काम आकर्षक छ ।’ कान्तिपुरबाट